Category: Xog Aruurin
Dhibaatooyinka ka haysta xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka fulinta howlihiisa
Anagoo kala ah Mahad Cusman Fiidoow iyo Maxamed Xuseen Axmed kana tirsan dufcadii 34aad ee kuliyada Maamulka iyo Maareynta Jaamacada Badweynta Hindiya. Waxaan halkaan idinku soo gudbineynaa xog-uruurin aan ka soo sameynay xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka.
Waxaan halkan uga mahad-celinaynaa kormeeraha xog-uruurintaan macalin Cusman Yusuf Raage oo naga caawiyay diyaarinta xog-uruurintaan intii aan isku qaabayneyn.
Waxaan xog-uruurintaan xooga kusaarnay dhibaatooyinka ka haysta xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka fulinta howlihiisa.
Xog-uruurintaan waxaa ka faa’idaysandoono xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka, gugiga maliyadda ee Baarlamaanka iyo ardayda mowduucaan mustaqbalka wax ka qori donta.
Waxaan mowduucaan u dooranay markii aan aragnay baahida loo qabo xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka shaqadiisa.
Xog uruurintaan waxaan ka soo sameeney magaalada Muqdisho, gaar ahaan wasaarada Maaliyada, xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka, macalimiinta jaamacaddaha iyo ardayda, dadkaas oo isugu jiray rag iyo dumar.
Su’aalaha aan xog uruurinta ku wediinay waxaa ka mid ahaa.
1. Xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka awood ma uleeyahay in uu kala xisaabtamo hay’adaha dowlada dhanka Xisaabaadka?
55% kiiba waxa ay ku jawaabeen xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka awood waa u lee yahay, halka 31%kiiba ay ku jwaabeen umalaha.
2. Suurtagal ma tahay in lala xisaabtamo Madaxda hay’adaha dowlada iyadoo Musuq-maasuq baahsan uu jiro?
80% kiiba waxa ay ku jawaabeen suurtagal ma ahan in lala xisaabtamo Madaxda ayadoo Musuq-maasuq baahsan uu jiro.
3. Xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka maheystaa awood dhaqaale iyo mid sharciyeed oo uu kufiyo howlihiisa?
84% kiiba waxa ay ku jwaabeen maheysto xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka awood dhaqaale iyo mid sharciyeed.
Su’aalahaan waxaan u aragnay in ay muhiim u ahaayeen xog uruurinteena.
Habka xog-uruurinteena waxa uu ahaa su’aalo weydiin iyo xogwareysi.
Intaan ku guda jirnay xog-uruurinteena waxaan soo ogaanay.
1. In fara-galin lagu haayo xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka.
2. Waxaan kaloon soo ogaanay inuu ku dhaqmo xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka Sharcigii uu dajiyay kacaankii 21-ka October sanadkii 1972-dii.
3. Waxaan kale oo aan soo ogaanay in ay shaqaalaha xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka aanan helin mushaar joogta ah.
1. Sharcigii hanti dhowrka guud ee uu baarlamaan ansixiyay in madaxweynaha saxiixo lagu daabaco faafinta rasmiga ah.
2. In lasiiyo mushaaraad joogta ah oo kufilan nolol maalmeed shaqaalaha xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka.
3. In la abuuro kalsooni ay bushada u heyso xafiiska Hanti Dhawrka Guud Qaranka.
Hagardaamooyin loo geysto Saxaafada iyo saameynta ay ku leedahay Xoriyatul Qowlka
Anigoo ah Cali Cabdi Maxamed kana mida ardada kaqalinjebisey Jaamacadda Badweynta Hindiya Dafcadii 34raad ee Maamulka iyo Maareynta, waxaan halkaan idiin ku soo bandhigayaa xog-uruurin aan kusameeyey Hagardaamooyinka loogeysto Saxaafada.
Intii aan ku gudajirey xog-uruurin waxaa iga caawiyey Kormeereheyga Pro: Cismaan Yuusuf Raage.
Xog-uruurinteyda waxey ku wajahneed Hagardaamooyin loo geysto Saxaafada iyo saameynta ay ku leedahay xoriyatul qowlka.
Xog-uruurin waxey faa’ido u leedahay
Xog-uruurin waxaa igu dhaliyey kadib markaan arkay Saxaafadu iney kagaabsaneyso Mowduucyada qaar Cabsi jirta owgeed
Su’aalaha aan dadka weydiiyey waxaa kamidahaa
Amaandarida kajirta magaalada Muqdisho, mafududeyneysaa in Saxaafada dhib loogeysto
Intabada hagardaamooyinka loo geysto saxaafada salka makuhayaan arimo siyaadadeed.
Gardarooyinka lagulakaco saxaafada makuleeyihiin saameyn toosa xoriyatul qowlka.
Waxaan u dortay su’aalahaan iney yihiin kuwa ugu haboon ee laxariira xog-uruurinteyda, isla markaana aan u arkaayey inaan ku helikaro xog sax ah.
Habka xog-uruurinteydu waxey eheed hab su’aalo weydiin ah taa soo aan u arkaayey ineytahay habka ugu fudud oo aan xog dhaba ku helikaro
Dadka aan su’aalaha weydiiyey
Dadka aan xog-uruurinteyda kasoosameeyey 63.5% waxey ahaayeen Rag halka 36.5% Dumar, dadkaas waxey isugu jireen qaar kamida shaqaalaha iyo maamulayaasha warbaahinta magaalada muqdisho.
Intaan ku guda jirey xog-uruurinteyda waxaan booqday
Ururka suxufiyiinta (NUSOJ)
Su’aalaha xog-uruurintayda aan ku weydiiyey waxaa kamidahaa:-
Amaan darada kajirta magaalada Muqdisho mafududeyneysaa in saxaafada dhib loogeysto, 66.7% waxey ku jawaabeen amnidarada kajirta magaalada muqdisho iney fududeyneyso in saxaafada wax loo geysto halka 23.8% ay ku jawaabeen maya
Inta badan hagardaamooyinka loogeysto saxafada salka maku haayaan arimo siyaasadeed, 61.9% waxey ku jawaabeen hagardaamooyinka loo geysto saxafada inta badan waxey salka ku hayaan arimo siyaasadeed, halka 9.5% ay ku jawaabeen maya
Gardarooyinka lagulakaco saxaafada makuleeyihiin saameyn toosa xoriyatul qowlka, 80.9% waxey ku jawaabeen gardarooyinka lagulakaco saxaafadda waa ku leeyihiin saameyn xoriyatul qowlka, halka 14.3% ay ku jawaabeen maya
Waxaan soo ogaadey intaan xog-uruurinteyda ku guda jirey
In 10kii sano ee ugu danbeysey lagu diley Muqdisho ilaa iyo 40 weriye
Waxaan ka loo soo ogaadey in xubnaha guddiga saxaafada muran kajiro
Waxaan ka loo soo ogaadey in xeerka saxaafadu sidii larabey uusan utaaba gelin
Waxaan soo jeedinaya in tabar dheeri la siiyo shaqaalaha ka shaqeya saxaafada
In saxaafada loo sameeyo xeer-ilaaliye khaas ah si uu u dabagalo wixii hagardaamoyin loo geesto saxaafada iyo xad-gudubyada saxaafada geystaan
Waxaan ka loo soo jeedinayaa wixii la kala tebaayo in lagu xaliyo nidaam maxkamadeed.
Waxan u mahad celinaya Allah subxaanahu watacaalaaaa
Waxan ka loo u mahadcelinayaa maamulka iyo macaliminta jaamacadda
Waxan kalon u mahadcelinayaa wasaarada warfaafinta iyo ururka suxufiyiinta